ABOUT US MM | lifeprepfoundation
၂. အများပြည်သူအကျိုးအတွက် အခြားသောပရဟိတ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ရန် သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းရန်
၃. ဘက်လိုက်မှုမရှိသည့် ဘုရင်၏ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် မည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီမဆို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း အကူအညီပေးခြင်းမပြုလုပ်ပါ
လူမှုပညာရေးချိုငဲ့သောကလေးငယ်များ အသက်(၃-၆)ကြား သူတို့၏အစဦးပညာရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် အခြားသောပြည်တွင်းပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပညာရေးအစီအစဉ်များကို ပံ့ပိုးကူညီရန်
LifePrep Foundation ၏ ပထမဆုံးရည်ရွယ်ချက်စီမံကိန်းသည် ချိုငဲ့သောကလေးငယ်များအတွက် သူတို့၏ပညာရေးကိုကူညီထောက်ပံ့ရန်နှင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားကလေးများပညာသင်ယူနေသည့်ကျောင်း၌ ပညာသင်ပေးနိုင်ရန် ဆရာ၊ဆရာမ ၀န်းထမ်းများထောက်ပံ့ကူညီရန်
Lifeprep ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ချို့တဲ့သောမိသားစုကနေလာတဲ့ကလေးများအတွက် ပညာရေးအခွင့်အရေးများစီစဉ်ပေးပြီ သူတို့တွေရဲ့ဘ၀လိုချက်အတွက် ထိုင်းစာ၊ အင်္ဂလိက်စာ၊ နေစဉ်ဘ၀နေထိုင်မှုနှင့် ကလေးအခွင့်အရေးများအားလုံးကို စွမ်းစောင်ပေးသည်။ Lifeprep ဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်တူ လူမျိုးဘာသာမရွေးတဲ့ အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများ၏ပညာရေးအစီအစဉ်များ၊ ကလေးငယ်များအကျိုး နှင့် ကလေးငယ်များ၏ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လုပ်ဆောင်နေသောအဖွဲ့အစည်းများကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးသည်။
Lifeprep ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ပုဂ္ဂလိက Non-Profit အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဖောင်ဒေးရှင်းသည် ဒေါက်တာ (Dr. Nanthaporn J.Seributra) ဥက္ကဋ္ဌအဖြင့် ဦးဆောင်းပြီး (မတ်လ ၂၆ရက် ၂၀၁၂)တွင် မှတ်ပုံတင်ထားခဲ့သည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် မည်သည့်အဖွဲ့ဝင်း (သို့မဟုတ်) မည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိပါ။
တည်နေရာ - LifePrep Foundation အမှတ် ၄/၂၃၇၊ မူ ၃၊ ဒမ်ဘွန် ဘန်ယဖရဲ့၊ မဟာချိုင်း၊ စမွတ်စခွန်၊ ၇၄၀၀၀